by UDan Drago
I-Amon Amarth yaseSweden yiyona nto ibhalwe yinto efana nento yokufakela i-metal metal metal. Ibhendi idlala isiginci segitala ezixutywe kunye namazwi omzimba anikezwa nguJohan Hegg. Eyasungulwa kwiminyaka eyi-90, i-band yazuza igama labo kwi-JRR Tolkien yeNkosi ye-Rings trilogy. Iingoma zebhanti zidibanisa intsomi yeViking kunye nembali yayo, kwaye ikhangeleka ukuba ibe ngabemi bonkulunkulu baseNorway ngokubonakala.
Omnye wamaqela angabonakali asebenzele umsebenzi wawo wonke ngereyibhile efanayo, u-Amon Amarth useyinye ye-backbones ye-Metal Blade roster iminyaka eyi-15 edlulileyo. Ukususela ekukhutshweni Kwakuba kuthunyelwe kwiHolo yeDorhu ngo-1998, umgangatho womsebenzi webhanki ungenakulungeleka, ukhulula i-albhamu yonke iminyaka emibili njenge-clockwork.
Ibhendi ikhiphe i-albhamu enamandla engama-9 kuwo wonke umsebenzi wayo ngokuhlukileyo kakhulu phakathi kweminikelo yabo. NjengaSlayer, amaqela angathandi ukutshintsha isitala yabo isebenza kwiinzuzo zabo. Baqhubeka nokuphucula izakhono zabo zokubhala, njengoko inxalenye yokugqibela ye-discography iqulethe ezinye zazo ezinamandla. Kule nyanga ndihlola iikhathalogu zabo kwaye ndisabalalisa ukukhishwa kweyona ndlela.
'Ukukhanya kweNdudumo kaThixo' (2008)
UAmon Amarth - Ukukhanya kweNdudumo kaThixo.
Kwiminyaka emibini nje emva kwengqondo eqhutywe neOden kwiCandelo lethu, u- Amon Amarth waqhubeka ephethe i-rekodi yazo enkulu yokuthabatha ukuya kutsho, iTwilight yeTyirha likaThixo . Ukungaphumeleli kude neprogram yokukhululwa kwabo kwangaphambili, ukubhalwa kwengoma kufana neqinileyo kodwa kulunge ngakumbi. Ingoma yomxholo ingenye yeengoma ezilungileyo kakhulu zika-Amon Amarth. Ukuqala ngokuqhuma kwegitare ehamba ngokulingana nantoni na kwikhathalogu yabo, i-chorus ithola uHegg ethatha ingoma yakhe engakhohlwayo. Yinto yokufa yesicatshulwa yokufa.
I-vocalist ye-entombed i-LG Petrov yenza iindwendwe ezibonakalayo zindwendwe kwi-"Guardians of Asgaard". "Uphi UThixo Wakho" ukubetha inqanawa, ungalokothi uvumele ukuhlaselwa kunye nokuqhaqhaqhaqha kwentsimbi ephindwe kabini kwi-drummer uFredrik Andersson. Akukona nje kuphela ukukhutshwa kwesi sibeka ibha kwibala lokufa, kunye ne-albhamu ye-Amon Amarth.
Umkhondo ophakanyisiweyo: "Ukukhanya kweNdudumo kaThixo"
'NgoOden kwiCandelo lethu' (2006)
UAmon Amarth - kunye no-Oden kwiCandelo lethu.
Ngokukhululwa kwe-albhamu yabo yesithandathu kunye no-Oden kwiCandelo lethu , u-Amon Amarth wayesele ezinzile ngokwabo kwiindawo zentsimbi yokufa. Ibhendi yaqhubeka ibonisa ukukhula njengoHegg owaziyo ukugqibelela indlela yakhe yokumangalisa apha kwaye wongezelela ubungqonge obunzulu beendlela zakhe ezinzulu. I rekhodi yinto ehlukileyo kakhulu ukuya kumhla kunye neParadesi elahlekileyo echaphazelekileyo "ithathwe phantsi kweNyakatho yeNyakatho" kunye neyodwa yeengoma zabo ze-epic "I-Hermod's Ride to Hel-Loke's Traachery Part 1," apho i-band ayizange ibe ngcono.
Ukuqhubela i-double bass kunye nokuzila ngokukhawuleza kuthatha i-tremolo guitar riffs kwi "Asator" ibonisa iqela elona libi kakhulu. UHegg uyi-monster engemva kwe-mic enikezela enye yezinto ezimbi kakhulu ezenza umsebenzi wakhe. I-Opener "UValhall Iyalindile" ibonisa amandla ensimbi eshukunyiswe ngumfutho oye waba ngumqolo we-modern day Amon Amarth ikhathalogu. I-chorus iyimvumi epheleleyo yokuhlala.
Umkhondo ophakanyisiweyo: "I-Hermod's Ride to Hel - I-Loke's Traachery Part 1"
'Ngokuchasene neLizwe' (2002)
UAmon Amarth - Ukuphikisa Ihlabathi.
I-albhamu yesine ye-Amon Amarth i- Versus the World yayiyimpumelelo emangalisayo ekuqwalaseleni ukuba ngumnyaka wesine ulandelelana ngokukhululeka okude. Ikhwalithi yokubhala ingongoma ephezulu kwaye ibona ukukhula kwebhanki kwaye ithatha inyathelo elikhulu ekuhambeni kokukhutshwa kwayo kwangaphambili, i -Crusher . Ukuzimisela kwabo ukwamukela i-tempos ezahlukeneyo kunye neendlela ezibonisa ukukhula okungafumaneki ngaphambili.
I-Opener "Ukufa Emlilweni" iqala ngokugubha kweentlanga kunye nenxalenye yesigarha esindayo kunye nesandi esiphuculweyo siphawula ngaphandle kwesango. Iingoma zengqungquthela kunye ne-riff ephawulekayo ebonisa indlela ekhethekileyo yokukrazula. Ukuzibona ngesigorha se-rilodic riff kwi-"Episode Yonyaka Yokuxhatshazwa" inomdlavuza. UHegg uguqulela isitayela esithethi ngakumbi ngeendinyana phambi kokuba i-chorus iqhume enye yeengoma zakhe ezingalibalekiyo. Lo mzila uhleli ngaphezu kweyona ikhathalogu kwaye yenye yeengoma ezigqithiseleyo zokufa. Ukubhekiselele kwiLizwe lifumana iqela elidibanisa ubuqhetseba kunye nokufikeleleka okungcono kunokuba luhlobo oluye lwabona ngaphambili.
Uluhlu Oluphakanyisiweyo: "Iminyaka YeeNkxwaleko"
UAmon Amarth - Umphindezeli.
Ukukhululwa kuka-Amon Amarth ukukhululwa kwe -Avenger kuyinto imizuzu engamashumi amathathu anesithandathu. Ukuza kwiqonga labo eliphumelelayo Emva kokuthunyelwa kwiHolo leMigcobo , i-band iqulunqe ithalente yabo yokubhala ngenkathi igcina ihlaselo elibi. Le yirekhodi yokuqala ukubonisa umgca wokuqhagamshela webhanki oye wafana naye ukususela (njengokuba oku kubhaliweyo). I-chemistry phakathi komgca ivalelwa kwangoko kwiingoma ezisixhenxe ngaphakathi.
Ukususela ekukhutshweni kwabo kwangaphambili, I-Avenger isona esiphezulu kakhulu phambi kuka-Amon Amarth. Ivula enye yeengoma zabo zangeklasi zangexesha elipheleleyo "Ukubhenwa kwaBantu baseMandulo," ephethe ipopu enkulu kunye neninzi yoma ingoma ejoliswe kwiingoma ezingenakukhunjulwa zegitare ngaphambi kokuba iphule enye yezona zihlandlo ezibalaseleyo zomsebenzi wazo. Ukuhamba ngokukhawuleza "uThixo, uNyana waKhe kunye noMoya oyiNgcwele" kubonakalisa izakhono zeDrums ezithandekayo zikaAndersson. Ukuqhaqha kwayo okuphindaphinda kabini kuzisa iqela kwizinga elihlukileyo. Ukuhlaselwa kwezwi likaHegg kukhulu kunene, kuvezwe kwi "Metalwrath" kunye nokuhlambalaza kwimizila engumntu wecandelo lomxholo. UPetrick Tatgren uphinde waziswe ukuba avelise kunye neetayina zakhe zokutyikitya kunye nezindleko zokuvelisa zaba yimpahla eninzi kwimpumelelo yangaphambili yeqela.
Umkhondo ophakanyisiweyo: "Ukubhenela oothixo baseMandulo"
'Ukhohlisi Thixo' (2013)
UAmon Amarth - Umkhohlisi woothixo.
U-Amon Amarth u-9 umkhululi wokukhululwa kooThixo ufumana iqela eliqhubayo kumazinga aphezulu, abuyele ekulawuleni emva kokuncincika kwe- Surtur Rising ka-2011. I-guitar riffs yinto emangalisayo kunye nevelele njengoko ivezwe kwi-trail title title kunye ne-epic efana ne-anthem "Njenge-Falls Loke." I-albhamu iphetha ngeminiti eyisibhozo kunye ne "Warriors of North", eyenza ukwakha okukhawuleza kunye negitare Ikhefu lokukhokelwa nguJohan Söderberg no-Olavi Mikkonen.
Ukugqwesa kwee-albhamu yinto yesibili ye-Candlemass u-Messiah Marcolin kunye noHegg kwi-"Hel" ephawulekayo. Amazwi omculo kaMarcolin aphikisana nokugqithisa okukhulu kukaHegg. Ingoma entsha njengo-Amon Amarth uyaqhubeka nokunyusa imida emitsha. Ukukhwabanisa ukuqhubela phambili kwi "Ukuza kweTide" ukulinganisela ngokukhawuleza kuthathe i-tremolo kunye negunya lenkampani ye-metal melodic riffing i-band iyaziwa. I-chorus ibalaseleyo.
Umkhondo ophakanyisiweyo: "Hamba"
30 I-Greatest Male R & B Abadlali bexesha lonke
Amaqabane ama-Hip-Hop aphezulu kakhulu
I-Top 10 ye-Rock Wedding First Dance Songs
Iingoma eziphezulu ezi-40 eziphambili zeePop
Indlela yokudala izixhumanisi kwi-PHP
IsiCwangciso sokuQala esiPhakathi kunye neSibini
Amanzi, Amanzi Naphi na ... ukusuka apha
Iinxalenye zentetho (i-rhetoric)
Imbali yoTywala: Isihlandlo
Izigaba zeMitosis kunye neSahlulo seSeli
Homer Simpson Iingcaphuno ezixhasayo
Novena of Grace u Mma
Amanqaku amnandi kunye neeKrinteworthy Moments '
Ukudweba Iingcamango zoBuso kunye namaPorraits